मानव अधि कारकर्मीको नाममा यस्तो घि’न लाग्दो काम, किशोर खतिवडा जस्तै यति धे रैलाई सिर्जना वाग्लेको समुहले फ’ साएको रहेछ (भिडियो सहित) – Ap Nepal
मानव अधि कारकर्मीको नाममा यस्तो घि’न लाग्दो काम, किशोर खतिवडा जस्तै यति धे रैलाई सिर्जना वाग्लेको समुहले फ’ साएको रहेछ (भिडियो सहित)
मानव अधि’कारकर्मीको नाममा हुने गरेका दलाली डरलाग्दो रुपमा मौलाएको देखि’एको छ । एउटै समुहवाट स’मस्यामा परेकाहरु अहिले दिनहुँ मि’डियामा आउन लागेका छन् । कलाकार किशोर खतिवडा र उनको प्रेमीका लक्ष्मी गदालबीच सम’स्या पारेर उनीहरुसंग पैसाको लागि वार्गेनिगं गरेको भिडियो सार्व’जनिक भएपछि हामी पनि यसरी नै समस्यामा परेका छौं भन्दै थुप्रै ब्यक्ति सार्व’जनिक भएका छन् । कल्पना केसी नाम गरेकी महिला पनि लक्ष्मी ग’दाललाई फकाएर किशोर खतिवडासंग १० लाख रुपैया माग्न लगाएको समुहले मलाई पनि सम’स्यामा पारे भन्दै मिडि’यामा आएकी छन् ।
उनको श्रीमान सुन्दर कुमार केसी ५ महिना देखि हिरास’तमा छन् । नारायण पौडेल र उनको श्रीमती अञ्जु नाम गरेकी महिला मिलेर आफुलाई सम’स्यामा पारेको कल्पनाको भनाई छ । सो समुहमा आफुलाई महिला मानवअधि’कारकर्मी बताउने सृजना वाग्ले पनि सह’भागी भएको देखिएको भिडियोमा कल्प’नाले बताएकी छन् ।
लक्ष्मी गदालले उनीहरुको वारेमा वास्त’विकता वताएपछि आफुलाई पनि हि’म्मत आएर उनीहरुका बारेमा खुलाउन हिम्म’त आएको बताएकी छन् ।
आफुले नारायण पौडेलसंग १५ लाख रुपैया लिन बाँकी रहेको र सोही पैसाको साटो ज’ग्गा दिने भनेर उनीहरुले भने पछि अञ्जु र कल्पनाको श्रीमान संगै जग्गा हेर्न भन्दै गएका थिए ।
त्यही संगै गएको बे’लामा मलाई कल्पनाको श्रीमानले अनै’तिक काम गरे भनेर आरोप लगाएको कल्प’नाको भनाई छ । कल्पना गदाललाई पनि अञ्जु नाम गरेकी महिलाले तिम्रो श्रीमान मसंग छन्, म किशो:रको श्रीमती हो भन्दै फोन गरेपछि किशोर र लक्ष्मीको बिचमा सम’स्या आएको थियो ।
कल्पना भन्दा पहिला एक जना पूर्व आर्मी राम’कुमार खत्री पनि आफुलाई अ’ञ्जुलाई नराम्रो म्यासेज पठाएको आ’रोपमा अदालत धाइ’रहेको भन्दै सा’र्वजनिक भएका थिए । कल्पना, पूर्व आर्मी रामकुमार खत्री र लक्ष्मी गदालको घ’टनामा एउटै समुह संलग्न भएको देखिएको छ । त्यसमा मानवअधिकारकर्मी बताउ’ने सिर्जना वाग्ले समेत रहेको उनीहरुले बताए’का छन् । इताजा खबरबाट
Prevनायिका पूजा र आकाशको यो भिडि योमा के छ त्यस्तो ? हाल्ने बित्तिकै भाइरल बन्यो हेरौ केही रमाइला (भिडियो सहित)
Nextमहान श्रीमान विनोदले के गरे य स्तो ? सेटमै चल्यो रुवा; बासी (भिडियो सहित)
निगमले घटायो उडान भाडादर